पाकेटमार | कृष्ण प्रधान
अङ्ग्रेजीको 'पकेट' शब्द अपभ्रंश भई हाम्रो जिब्रोमा 'पाकेट' वा 'पाकिट' रुपमा वास बस्न थालेको हो। पाकेटको अर्थ खल्ती वा गोजी हो । त्यसरी नै पाकेटभित्र भएको मनी पर्स (वालेट) वा पैसा आदि थाहा नपाउने पाराले एकमिलिकमै झिकेर आफ्नो बाटो तताउने व्यक्तिलाई 'पाकेटमार' वा 'पाकेटमारा' भनिन्छ अनि त्यसरी अर्काको खल्ती वा गोजीबाट मनी पर्स वा पैसा थाहै नपाउने गरी झिक्नुलाई 'पाकिट काट्नु' भनिन्छ । पाकेटहरूबारे हेनतेने लेख्नु बुद्धिमानी होइन अवश्यै । निपुण कलारुपमा पाकेट काट्ने परम्पराले दीर्ध दिनदेखि नै समाजमा आफ्नो ठाउँ बनाएको छ । त्यति पर जाने मनसाय मेरो नभए पनि एउटा कुरा चाहिँ छाती ठोकेरै के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो पहाड़तिर अर्काको खल्ती वा गोजीबाट मनी पर्स वा पैसा झिक्ने पाकिटमारहरू देखिँदैनन् । जबकि मधेसमा भने यस्ता पाकिटमारहरू घुँइचो, हाट-बजार, मेला, रेल्वे स्टेशन्, बस-स्ट्याण्ड, बसभित्र हुन्छन ।
पाकेट काट्नु पनि एउटा कला हो, सीप हो । जोसुकैले पाकिट काट्न सक्तैन । यसको निम्ति विशेष तालिम लिएको हुनुपर्छ । ठूल्ठला शहरहरूमा पाकेट काट्ने तालिम दिइन्छ । पाकेटमारको तालिम लिनेहरू प्रायः दसदेखि तेह्र-चौध वर्षसम्मका बेवारिस भुराहरू हुन्छन् । पछि यिनै भुराहरू दक्ष पाकिटमारमा परिणत हुन्छन् । जस्तै घुँइचोमा पनि आफ्नो आौंलीको सीपले अर्काको खल्तीबाट मनीपर्स वा पैसा एक मिनटमै निकाल्छ । आफ्नो औंलीको सीप चलेन भने यी पाकिटमार छुरा चलाएर पनि आफ्नौ काम फत्ते पारी छोड़्छन् । यसैकारण ता, मधेसका बसहरुतिर 'पाकेटमारदेखि सावधान' भन्ने सतर्क लेखिएको देखिन्छ । तरै पनि मधेसका बसभित्र नै प्रायः पाकेट काटिन्छ । सिलगढ़ी कोर्ट मोड़देखि लार्जिलिङ मोड़सम्म, दार्जिलिङ मोड़देखि मतिगड़ासम्म, मतिगड़ादेखि बाधडुग्रासम्म्, बाघडुग्रादेखि ऩक्सलबारसम्म अऩि नकसलबारीदेखि पानीट्याङ्की (नेपाल सिमाना) सम्म आ-आफ्ना इलाका बाँड़ेका हुन्छन् यी पाकेटमारहरूले । आफ्नो इलाकाबाहेक अरुको इलाकमा कसैले पाकिट मार्नु पाउँदैन । ठुङमार्दो कुरा ता के छ भने, मानिलिनोस्, कोर्ट मोड़देखि दार्जिलिङ मोड़सम्ममा एकजनाको पाकिट काट्न सकिएन भने ती पाकेटमारले दार्जिलिङ मो़ड़देखि मतिगड़ासम्म आफ्ना सहृपाकेटमारलाई जिम्मा दिएर बसबाट ओर्लिन्छ । मतिगड़ासम्म पनि त्यो काम सफल भएन भने त्यो का य़थाक्रमले इलाका-इलाकाका सहपाकेटमार साथीलाई सङ्केत दिएऩ आफू ओर्लिन्छ । आफूले चिनाएको व्यक्तिलाई अऩ्य इलाकाका पाकेटमार साथीले पाकेट मारेका खण्डमा सामान्य अंश कमिसन दिइने पनि चलन छ । एकपल्ट पाकेटमारको नजरमा परेपछि सिलगढ़ी कोर्ट मोड़देखि आरम्भ गरेर कुनै न कुनै ठाउँा पाकेट काटिन्छ काटिन्छ ।
अझ अचम्म र उदेकलाग्दो कुरो ता के छ भने, बसका कण्डक्टर, खलासी प्रत्येकले प्रत्येक पाकेटमारलाई चिनेको हुन्छ । तर कसैले पनि फलानु पाकेटमार हो भनेर आफ्ना यात्रुहरूलाई चिनाउन ता के सुइँकोसमेत दिँदैन । यसको कारण प्रत्येक बस स्टाफलाई कमिसन दिइन्छ भन्ने पनि पाकेटमार सूत्रबाट थाहा लागेको छ । तर ती बस स्टाफलाई तपाईहरू कसैले पनि 'तिमीहरूले पाकेटमारले चिन्नुपर्ने' भनेर साध्नुभयो भने उनीहरूको एउटै जवाफ हुन्छ, 'यिनीहरूसित बैरी गरेर थोरै हामीले ज्यान गुमाउनु छ र! तपईहरू एकदिन बसमा चढ़ेपछि फेरि-फेरि यो बाटो नहिँड़्दा हुन्छ तर हामी ता रातदिन यही बाटो ओहोर-दोहोर गर्नुपर्छ ।' यसैकारण बसतिर ! 'पाकेटमारदेखि सावधान' लेखिएको सतर्कवाणी ता बसवालहरूले आफूलाई जोगाएका हुन् कि भन्ने शङ्का लाग्छॉ। 'सुझनीमा के छ हजूर, बुझनीमा छ' भनेजस्तो खास गु़ढ़ कुरा ता अर्कै छ ।
पाकेटमारको एउटा कथा सुनाउन मन लाग्यो । बाघडुग्रा जाने बसमा यूनिभर्सिटी जाँदै थिएँ म । पछिल्लो सिटमा अचानक एकजना अधवैंशे यात्री रुन थाले. 'मेरो सर्वनाश भयो । पाकेटमारले मेरो मेनी पर्स लग्यो ।' सबैले तिनलाई ट्वालट्वालती हेर्न थाले । नेक्सट स्टपेज आइपुग्नै आँटेको थियो । एकजना खाइलागदा युवक केही वास्तै नगरी पछिल्तिरबाट सबैलाई ठेल्दै गेट छेउमा पुगेर एक्कासी चिच्यायो, 'रुन्छस् ? नाथे पच्चीस रुपियाँको लागि रोएर दुनियाँलाई हसाउँछस् ? ला....तेरो मनी पर्स ।' रुने मान्छेको काखैमा मनी पर्स झटारो हानेर ती युवक बीचैमा बसबाट ओर्लियो ।
यसैकारण, मलाई ती अचेल पेशागत पाकेटमार भन्दा पनि हाम्रो भविष्यलाई भीरको चिण्डोजस्तै पार्ने राजनैतिक पाकेटमारहरूसित डर लाग्न थालेको छ । 'आफ्नो थैलो बलियो बांध्नु, साथीलाई चोर नलाउनू' भन्ने बूढ़ापाकाको उखान रुपियाँमा सोह्रै आना सही लाग्न थालेको छ । यसैले मेरै मात्र होइन, अब जन्मिने छोराहरू जति सबै पाकेटमार नै भएर जन्मिदिउऩ् । यति हो हाम्रो पहाड़ा कुना-काप्चा, शहर-बजार, गाउँ-घरमा पाकेटमारै पाकेटमार फैलेलान् । जोसुकैको पाकेटड काटिएलान् । ठीकै छ । हाम्रा पाकेटमारले हाम्रैहरूको पाकेट काट्लान् । ठीकै छ । हाम्रा पाकेटमारले हाम्रैहरूका पाकेट काटुन् न के भो र ! पहाड़का सबै छोराहरू पाकेट काट्ने धन्दामा लाग्दा कम्तिको पनि हाम्रो पहाड़मा हत्या गर्ने प्रतियोगिता नहोला, ड्रग्स खाने वा ड्रग्स सप्लायरहरू निमिट्यान्नै होलान् । राजनैतिक पाकेटमारहरूका सङ्ख्यामा ह्रास आउला । हाम्रो सुन्दर पहाड़को भोलिको बिहान सुनौलो होला....हाम्रो भविष्यचको गोरेटो फाँटिलो र फराकिलो होला ।
तर खल्ती काट्ने पाकेटमारभन्दा राजनैतिक पाकेटमारदेखि जोगिनुहोस् ।
सिलीगुड़ी (उत्तर बङ्गाल, भारत) ।